तीन वर्षकी छोरी छिन, जब चाहन्छु तब विवाह गर्नेछु : अभिनेत्री गिल| Nepal Pati
एजेन्सी । भारतीय कलाकार माही गिल आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा खासै बोल्न रुची राख्ने गर्दिनन् । पछिल्लो समय एक अन्तर्वार्तामा उनले खुलेर भनेकी छिन, “सन्तान जन्माउनको निम्ति विवाहको कुनै जरुरी छैन । म अविवाहित हुँ । रिलेसनसिपमा छु । मेरो एक तीन वर्षिया छोरी छिन । म गर्वका साथ भन्छु, म एक छोरीकी आमा हुँ ।”
नवभारत टाइम्सको एक साक्षात्कारमा ४३ वर्षिया अभिनेत्री गिलले भनिन्, “विवाहको के जरुरत छ ? यो सब सोच र समयमा निर्भर गर्दछ । परिवार र बच्चा विवाहबिना नै हुन् सक्छ । विवाहबिना बच्चा हुनुले के फरक पर्छ ? मलाई लाग्दैन कि यसले कुनै समस्या निम्ताउने छ । विवाह एक ‘खुबसुरत चिज’ हो । तर गर्ने वा नगर्ने व्यक्तिगत रुचिको विषय हो । “
दबंग, जन्जिर र पान सिंह तोमरमा आफ्नो कला देखाएकी अभिनेत्री गिल देव डी र साहेब बीबी र ग्यांगस्टार सिरिजमा देखिएकी थिइन् । उनले व्यक्तिगत जीवनमा प्रकाश पार्दै भनिन्, “मेरो छोरीको नाम बेरोनिका हो । उनी आउने अगस्टमा तीन वर्ष पुग्ने छिन । “
पछिल्लो अन्तर्वार्तासँगै अभिनेत्री गिलको निजि जीवन र साहसले बलिवुडमा तरंग ल्याएको छ ।
एजेन्सी । तापासी पन्नु अभिनीत अनुभव सिन्हाको फिल्म...